म्याकडोनाल्ड बाट स्यान्डी आइसक्रीम - Thermomix व्यञ्जनहरु ThermoRecipes
मिठाई199 मिनेट4 व्यक्ति230२ क्यालोरी
यो मेरो एक हो मनपर्ने आइसक्रीम। मलाई थाहा छैन कि यस प्रकारको आइसक्रीम कती खपत हुनेछ।
म सधैं भएको छु आइसक्रीम को बारे मा भावुक। जब म सानो थिएँ, मेरी आमाले मलाई वर्षको पहिलो आइसक्रिम किन्नुहुन्थ्यो जब वसन्त आयो र उनी सधैं मलाई भन्थिन्: "मेरी आमा, प्रत्येक पटक तपाइँ आफ्नो सिजनको पहिलो आइसक्रीम लिनु अघि, एह !!" .. उनी सधैं एक आमा को रूप मा मेरो हेरचाह गर्न को लागी कोसिस गरीरहेकी छिन्, ताकि केहि चिसो नलगाउन र मेरो खुसी एन्गुईन्स जसले मलाई धेरै समस्या दिईयो जब सम्म मैले उनीहरुलाई हटाई दिएन।
तर जब मेरो किशोरावस्था आयो र मँ अब मेरो आहार नियन्त्रण गर्न को लागी धेरै पहुँच थिएन, म सधैं उनको वाक्यांश "यो सिजन को पहिलो आइसक्रीम हो" हरेक पटक म एक थियो, किनभने यो कहिल्यै समाप्त भयो, न त यो शुरू भयो। आइसक्रीम मौसम। म पन्ध्र बर्षको उमेरदेखि नै मेरो सम्पूर्ण जीवन को लागी यी आइसक्रीमहरु भएको छु र यो महिना दुर्लभ छ कि मँ एक छैन। मलाई मनपर्छ!
मेरो मनपर्ने संग छ चकलेट र मेरो श्रीमान् क्यान्डी, तर म तिनीहरूसँग यति चिन्तित छु कि मैले उहाँ भन्दा मेरो छिटो समाप्त गरें र म जहिले पनि उसलाई समाप्त गर्न दिन्थें। तिमीलाई मह याद छ? "प्रेमका कुराहरु" !! नराम्रो कुरा ... मलाई लाग्छ कि मैले उनलाई लगभग बीस बर्षमा सँगै एउटा पनि समाप्त गर्न दिएन।
म स्वीकार गर्नै पर्छ कि म कती उत्साहित थिएँ ब्लग "मीठो र नमकीन नाश्ता" मा यो नुस्खा पाउनको लागी। यो सबैभन्दा नजिकको चीज हो जुन मैले आइसक्रीम को यस प्रकार को लागी पाएको छु। यो हो धेरै क्रीमी र यो छिटो पग्लन्छ। एक पटक गरेपछि म यसलाई पूर्ण रूपमा स्थिर गर्न दिन्छु। भोलिपल्ट मैले यसलाई खाना भन्दा पहिले अलिकति बाहिर निकाले र यसलाई ३० सेकेन्ड को एक म्याश दियो प्रगतिशील गति 30-5 संग, यो आफ्नो मुख बाट spatula संग मद्दत। बनावट आदर्श थियो र यो महान बाहिर आयो !!
म्याकडोनाल्ड आइसक्रीम स्वादिष्ट छन् तर यदि तपाइँलाई आवश्यक छ अधिक प्रेरणा र नयाँ विचारहरु र स्वादिष्ट तपाइँ प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ यो आइसक्रीम… यो तपाइँ आश्चर्यचकित हुनेछ!
1 म्याकडोनाल्ड्स बाट बलौटे आइसक्रीम
यो मेरो जीवन को आइसक्रीम हो ... यो मलाई पागल ड्राइव!
१० g कर्नस्टार्क
Sugar० g चिनी (गोरा माउन्ट गर्न)
हामी एक सानो दूध मा मकै स्टार्च भंग र Thermomix® गिलास मा राखे।
हामी चिनी, बाँकी दूध, माखन, भनिला र हामी प्रोग्राम थप्छौं Minutes मिनेट, १००º, गति १।
हामी मिश्रण कन्टेनरमा राख्छौं र यसलाई ठण्डा नभएसम्म फ्रिजमा राख्छौं।
जब मिश्रण चिसो हुन्छ, हामी ४० ग्राम चिनी सफा र सुक्खा गिलासमा राख्छौं। हामी कार्यक्रम १० सेकेन्ड, प्रगतिशील गति 15-5।
हामी पुतली ब्लेडमा राख्छौं र अण्डो गोरा, माउन्टिंग माउन्ट गर्दछौं २ मिनेट, गति 8 र १ seconds सेकेन्डको अभावमा हामी धेरै चिसो क्रीम थप्छौं।
हामी मिश्रण कन्टेनरमा राख्छौं र यसलाई फ्रिजरमा भण्डार गर्दछौं।
यो अर्ध-जमेको उपभोग गर्न सकिन्छ वा यदि हामी यसलाई स्थिर गर्न को लागी अनुमति दिईयो, यो सेवा गर्नु अघि, Thermomix® मा केहि सेकेन्ड को लागी पास गर्नुहोस्।
थप जानकारी - रातो लाईकोरिस आइसक्रीम
स्रोत - Thermomix® को लागि नुस्खा परिमार्जित र ब्लग "मीठा र नुन खाजा" बाट अनुकूलित।
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: Celiac, सजिलो, Postres, गर्मी रेसिपी, बच्चाहरूको लागि व्यंजनहरु
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » Postres » म्याकडोनाल्ड्स बाट बलौटे आइसक्रीम
ओह कस्तो राम्रो देखिन्छ! म यो आज दिउँसो गर्न गइरहेको छु भोलि यो मेरो जन्मदिनको उत्सवमा खाने - thing .. सानो कुरा, फोटोमा मा आइसक्रीम माथि के छ? धन्यवाद !!
मलाई लाग्छ यो कुनै सिरप, कारमेल, स्ट्रबेरी, चकलेट हो ...
हो पाको, तपाईं सहि हुनुहुन्छ।
अना, मैले यसलाई कारमेल सिरप र क्रोकेन्टीको साथ गार्नेस गरें।
फातिमा गोमेज भन्यो
के हामी माखन छोड्न सक्छौं वा यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छौं ????? मलाई मनपर्दैन: ((न त बटर, न क्रीम, न पनीर, ...: ((((
तपाईको ब्लगमा बधाई छ, यो राम्रो छ
फातिमा गोमेजलाई जवाफ दिनुहोस्
फातिमा, सत्य यो हो कि मैले पत्ता लगाएको नुस्खा यस्तै थियो र मलाई यो थाहा छैन कि यो यो बिना कसरी हुन्छ। यदि कसैले हेर्न कोशिस गर्छ कि त्यसले हामीलाई केहि भन्न सक्छ कि सक्दैन।
मार्को एंटोनियो भन्यो
सिल्भिया, जब तपाइँ भनिला सारको मतलब, यो पोड को भित्र हो?
मार्को एन्टोनियोलाई जवाफ दिनुहोस्
तिनीहरूले यसलाई यस्तै बेच्छन् र यो वाहिन ब्रान्डको सानो बोतल हो, जुन स्वाद दिनको लागि भनिला सार हो।
नमस्ते सिल्भिया, यदि मैले उल्टो चिनी राख्छु? गर्न सकिन्छ?
लामो थर्मामिक्स बाँच्नुहोस्
हो मार्ग, तपाईलाई थाहा छ कि आइसक्रीम उल्टो चिनीको साथ धेरै राम्रो छ।
आज बेलुका सिल्भिया म तल काममा ओर्लन्छु ... ... धनी… यो स्वादिष्ट देखिन्छ !!!! राम्रो, धेरै बी एस
र तपाईको महान विचारहरूको लागि सँधै धन्यबाद जुन तपाईले हामीलाई दिनहुँ दिनुहुन्छ !!! म तपाईको ब्लगलाई माया गर्छु म काटिएको छु।
मलाई आशा छ यो तपाईंलाई मनपर्‍यो, यो धेरै राम्रो छ। यद्यपि यो तत्कालै खस्छ। तपाईंले यसलाई चाँडै खानु पर्छ।
सिल्भिया, यस अवसरमा म तपाईंलाई बधाई दिन चाहान्छु किनकि यो सामान्य छ कि तपाईको व्यंजनको परिचयमा तपाईले आफ्नो परिवारलाई सघाउनु हुन्छ, र सँधै विशेष कोमलताका साथ। जादूको लागि बधाई छ जुन तपाइँले सबै चीजहरू राख्नु भएको छ, साथै तपाइँको व्यंजनहरु र तपाइँको ब्लग सहित
ओल्लाला, धेरै धेरै धन्यबाद, किनकि यस प्रकारका टिप्पणीहरूले मलाई दिनहुँ मेरो व्यंजनहरू बारेमा र अन्य सबैलाई साझा गर्ने इच्छाको बारेमा अधिक जोशिलो बनाउँछ। यद्यपि एक भन्दा बढी अवसरहरूमा मलाई आश्चर्य छ कि यदि म तपाईंलाई मेरो जीवनको बारेमा यति धेरै बताउन एक बोर हुनेछैन। मेरो परिवारबाट मैले पाइरहेको समर्थनका लागि मैले तपाईं सबैलाई विचार गरें।
सिल्भियाको कुनै सार नभएकोले मैले क्रीम तयार गर्दा आधा भागमा एक भनिलाको बीन थपियो र यो स्वादिष्ट थियो।
ओला मलाई सुन्डीइइइइइ माया गर्छु !! jjeejej र कर्नस्टार्च संग एक सानो दूध कति छ? र crocanti ती कहाँ तपाईं तिनीहरूलाई किन्न सक्नुहुन्छ?
जोस फर्नांडो डियाज भन्यो
नुस्खा को लागी धन्यवाद !!!
यो मेरो लागि ठूलो बनेको छ।
यसको कुनै भेनिला सार थिएन (के कसैलाई थाहा छ कि तपाईं यसलाई म्याड्रिडमा कहाँ किन्न सक्नुहुन्छ ???) र मैले यसलाई मर्काडोना भेनिला चिनीको केही चम्मच (आधा कपको मुनि) संग प्रतिस्थापन गरेको छु।
यो मर्नको लागि हो ... म यो आइसक्रिमको प्रशंसक हुँ!
होसे फर्नांडो डाजालाई जवाफ दिनुहोस्
सिल्भिया, तपाईं कहाँ कारमेल सिरप किन्न सक्नुहुन्छ, किनकि यो तरल कारमेल छैन, हैन? कृपया मलाई जवाफ दिन सक्नुहुन्छ !! धन्यबाद म तपाईको व्यंजनहरु मन पराउँछु, म तिनीहरु सबै लाई लागी कोशिश गर्छु।
मैले क्यारिफोरमा भनिला किनेको छु, यो वाहिन ब्रान्डको सानो बोतल हो र यो प्राय: जसो पोडिंग र डेसर्ट तयारीको साथ हुन्छ। मैले भर्खरै यो गरें र यसको अद्भुत गन्ध छ, यसको स्वाद यस्तै छ, म तपाईंलाई यसको बारेमा भन्नेछु।
तपाईले कल्पना गर्न सक्नुहुन्न कि मेरो श्रीमान्‌ले यसलाई खाँदा कति लामो भयो हहाहा, सत्य यो हो कि यो महान् छ, सिल्भिया, के यो यार्क गोरो जत्तिकै गोठ्न सकिन्छ? त्यो चारको साथ मलाई थाहा छैन उनीहरूलाई के गर्ने र त्यहाँ अरू धेरै छन् कि म तिनीहरूलाई एक क्याटलान क्रीम वा यस्तै केहि बनाउनको लागि बचत गर्न चाहान्छु, धन्यवाद।
म खुशी छु कि तपाईंले यो मनपराउनु भयो, सत्य यो हो कि यो आइसक्रिमको लक्जरी हो र क्रीमयुक्त !!
फ्रिजिंग अण्डाको पिण्डको विषयवस्तुको साथ, कुनै समस्या छैन। तिनीहरू भन्छन् कि तीलाई कोर्रा लगाउनु सजिलो छ, अन्यथा हिउँद छ भने जर्दी ढाक्ने फिल्म विस्फोट हुन सक्छ।
स्वादिष्ट! जब म म्याकडोनाल्डमा जान्छु म सोध्छु!
नुस्खा को लागी धन्यवाद!
Mª कारमेन भन्यो
एलेना मलाई यो कसरी गर्ने भनेर थाहा छैन, यो यो हो कि म्याकमा उनीहरूले इमानेनहरू र किट-क्याटको साथ बनाउँदछन् र मलाई थाहा हुँदैन म तिनीहरूलाई कहिले समावेश गर्न सक्दछु।
Mª CARMEN लाई जवाफ दिनुहोस्
MªCarmen, तपाइँले मलाई के भन्नुहुन्छ ती टप्पिंगहरू हुन् जुन तपाईं त्यसपछि आइसक्रीममा थप्नुहुन्छ जब तपाईं यसलाई गिलासमा पिउनुहुन्छ। तपाईंले तिनीहरूलाई अघि थप्नु पर्दैन।
नमस्ते सुन्दरी, म नौसिखो हुँ, म मेरो जुत्ता लगाउँदैछु, गत रात मैले खाना खाएको थिएँ केही समुद्री खाना क्लेमहरू, हेम र चीज चीजहरू र स्यान्डि पछाडि मर्काडोनाबाट ट्युलिप्समा, म तपाईंलाई आहारको बारेमा बताउन जाँदैछु। नरक
मसँग एउटा प्रश्न छ, कसरी एक पटक स्थिर भएको आइसक्रीम मलाई पास गर्नु पर्छ? मलाई थाहा छैन कि पुतली संग वा ब्लेड, गति र समय संग।
धेरै पहिले नै धन्यबाद, वा मेरो आहारको प्रकोपको लागि एक क्यापन किनभने तपाईंले स्वादिष्ठ चीजहरूको साथ त्यहाँ प्रतिरोध गर्न सक्ने कुनै जिप्सी हुँदैन। त्येत्तिकै भनेको।
क्रिस्टिना, तपाई ब्लेडको साथ आइसक्रिम क्रस गर्नुहोस्, २० सेकेन्डको गतिमा and र तपाईले हेर्नुहुन्छ कि यो तपाईलाई राम्रो देखिन्छ वा यदि यसलाई अलि बढी कुचल्नु पर्छ भने तपाई गति पनि बढाउन सक्नुहुनेछ।
तपाईंले प्रकाशित गर्नुभएका सबैजस्तै रेसिपी राम्रो देखिन्छ। मेरो टिप्पणी तपाईलाई एउटा प्रश्न सोध्नु हो, मेरो जवान छोरालाई PLV बाट एलर्जी छ, त्यसैले उसले दूध भएको कुनै पनि चीज लिन सक्दैन, के तपाईलाई 100% सब्जी मार्जरीन र गाईको सट्टा सोया मिल्कमा मक्खन परिवर्तन गर्न सम्भव छ जस्तो लाग्छ? के खानेकुरा बाहिर आउँछ? मैले दूध बिनाको आइसक्रिमको लागि कुनै नुस्खा फेला पार्न सक्दिन, र साढे दुई वर्षको उमेरमा हामी सबैले केहि खाँदा मलाई पहिले नै दुःख लाग्छ र उसले सोध्छ ... के म "पासन" गर्छु? यदि तपाईंले मलाई दूध बिनाको आइसक्रिमको नुस्खा बताउन सक्नुहुन्छ ... म यसको प्रशंसा गर्नेछु। मैले तरबूज स्लशको प्रकाशन देखेको छु, हामी यसलाई पनि प्रयास गर्नेछौं, यद्यपि मेरो विचार केहि क्रीमयुक्त थियो ...
एलिया, म तपाईंलाई मार्जारीन र सोयाको साथ बताउने कोशिस गर्दछु। मलाई लाग्छ यो राम्रोसँग जान सक्छ। यो पनि तपाईलाई बताउनुहोस् कि मर्क्याडोनामा ल्याक्टोज एलर्जीका लागि उपयुक्त तरकारी क्रीम रहेको छ, मैले कुनै आइसक्रिम बनाउने कोसिस गरेको छैन तर तपाई यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ।
सारा फर्नांडीज भन्यो
मैले मर्काडोनाको तरकारी क्रीम प्रयोग गरिसकेको छु (किनकि मलाई दुधको एलर्जी छ) बरफको क्रीम बनाउनका लागि र तिनीहरू स्वादिष्ट बाहिर आउँदछन्!
सारा फर्नांडीजलाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईको योगदानका लागि धन्यवाद !!!
नमस्ते सिल्भिया, म तपाईको प्रशंसक हुँ, मेरो श्रीमान् र म तपाईले मलाई पठाउनु भएको सबै चीज मन पराउनुहुन्छ, म चाहन्छु कि यदि तपाई मलाई थर्मोमिक्सको डाइट रेसिपी पठाउन सक्नुहुन्थ्यो र सम्भव भए बलुवा तर डाईट, चिया हामी तपाईलाई धेरै चुम्बनहरुमा अग्रिम धन्यवाद दिन्छौं।
हामी अधिक प्रकाश रेसिपीहरू प्राप्त गर्ने प्रयास गर्छौं, तर के म सधैं प्रयास गर्दछु स्वीटनरको साथ मिठाईहरू बनाउने, म क्यालोरीलाई केही हदसम्म कम गर्नेछु।
ब्ल्गमा बधाई छ। म सबै ठाउँमा भेनिलाको सार खोज्दै छु (मर्काडोना, क्यारेफोर, एल कोर्टे ईन्ग्लिस ...) तर मैले फेला पार्न सकिन। के यो केहि संग प्रतिस्थापन गर्न सम्भव छ?
Lou लाई जवाफ दिनुहोस्
यो भनिला चिनी, वा वैनिला स्वादहरु को लागी स्वैप गर्नुहोस्।
यो निकै राम्रो छ, म पनि तिनीहरूलाई प्रेम गर्दछु र जब म नुस्खा देख्छु मसँग घरको रानी सुरु गर्न समय थिएन। !!!!!! एक बाश… ..
जसरी तपाईले भिक्टोरिया भन्नुहुन्छ, म मेरो थर्मोमिक्स "घरको रानी" लाई पनि विचार गर्छु ... म उनी बिना के गर्थें? म तपाईंलाई हाम्रो रेसिपीहरू मन पराउन खुसी छु। शुभकामना
नमस्ते! म पहिले नै आइसक्रिम बनाउन चाहन्छु। तर मसँग एउटा प्रश्न छ: यो कुन आधारशिला हो? पिठो हाल्छ कि एक गाढा? धन्यवाद!
एउटाले राम्रो मकैको पिठो हाल्छ
Mmmmm, तर के एक नुस्खा !!!! मैले सक्दो चाँडो यसको प्रयास गर्नुपर्‍यो, र म म्याकडोनाल्डमा रहेको हल्ला हल्लाउन प्रयास गर्न चाहेको रकम बनाउनेछु, के तपाईं तिनीहरूलाई सम्झनुहुन्छ ??? यदि चीजहरू मेरो लागि बाहिर काम गर्दछ भने, म तपाईंलाई भन्दछु ताकि तपाईं तिनीहरूलाई प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ !!! धन्यवाद!!!!
मलाई खुशी छ कि तपाईलाई यो नुस्खा मनपर्‍यो। सत्य यो हो कि यी बरफ क्रीमहरू एक उपाध्यक्ष हुन्।
उनीहरू डाइईभ्री हुन् महान मलाई लाग्छ कि म तिनीहरूलाई फ्रिजरमा चुकिएको छैन, तपाईंको व्यंजनहरुका लागि धेरै धन्यबाद, तिनीहरू सबै राम्रा अभिवादन छन् ...
तपाईले बेलेनलाई मन पराउनु भएकोमा म खुशी छु !!
नमस्ते सिल्भिया, म यसमा नयाँ छु, तर मैले देखेको छु कि सबैजना राम्ररी बोल्छन्। एउटा प्रश्न, के आइसक्रिम क्रिस्टल हुँदैन?
कुनै भेरोनिका छैन, यो धेरै राम्रो देखिन्छ। तर म सिफारिस गर्दछु कि आइस क्रिमहरूमा तपाईंले उल्टो चिनी बनाउनुहोस् जुन तपाईं ब्लगमा देख्न सक्नुहुन्छ, किनकि यसले क्रिस्टलाइज नगर्न र मलाई क्रीमियर हुन मद्दत गर्दछ।
म्याकडोनाल्डमा राखिएको क्यान्डी पागल भए कहाँ पाउन सक्छु। धन्यबाद।
नमस्ते ईन्मा, मलाई सच्चाइको कुनै विचार छैन। हुनसक्छ अन्य पाठकहरूले हामीलाई एक हात दिन सक्छन् ...
नमस्ते प्यारो! ब्लागमा बधाई छ, मलाई यो मन पर्छ। अहिले म आइसक्रीम दोहोर्याइरहेको छु, अन्य मैले गरेको एउटा विजय थियो! यदि कसैलाई चासो छ, म तिनीहरूलाई मर्काडोना गोरा बनाउँदछु, त्यसैले मलाई यर्कोको साथ नरिवल मनपर्दैन, र यो उत्तम छ !!!!
धेरै प्रोत्साहन र यस प्रकारको जारी!
तपाइँको टिप्पणी को लागी धन्यवाद, पक्कै पनि यस तरीकाले अधिक मानिसहरूलाई यो स्वादिष्ट नुस्खा तयार पार्न प्रोत्साहित गरिएको छ।
ब्लगमा बधाई हो र नुस्खामा बधाई हो, मैले यो नुस्खा देखेको छु र मेरी छोरीहरूले यो मन पराए, नुस्खाका लागि धेरै धेरै धन्यवाद।
महान Veronica !! मलाई थाहा छ कि तपाइँले यसलाई प्रेम गर्नुभयो भनेर मलाई कत्ति खुसी लागेको छ ... बच्चाहरू महान गोरमेटहरू हुन् !! धेरै चुम्बनहरू र हामीलाई अनुसरण गर्नका लागि तपाईंलाई धन्यवाद।
निना रोमेरो भन्यो
मलाई टर्मोनटको व्यञ्जनहरू मनपर्छ म तीन चकलेटको केकहरू र केहि बलहरू मन पराउँछु र मलाई आशा छ तपाईंले मलाई पठाउनुहोस्।
NINA ROMERO लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार नीना, तपाईले मुख्य पृष्ठमा दायाँको सदस्यता लिन सक्नुहुन्छ, आफ्नो ईमेल ठेगाना छोड्दै। धन्यवाद!
शुभ - प्रभात!!
मलाई तपाईको व्यंजनहरु साँच्चिकै मन पर्छ। हिजो मैले आइसक्रीम बनाएँ, र मलाई थाहा भएन के गल्ती भयो, तर त्यहाँ खाने कोही थिएन। तपाईंले प्रयोग गर्ने कन्स्टार्च एउटा खाम हो? G०gr en खामहरू हुन् !!!! मलाई लाग्छ कि त्यो मलाई असफल भयो।
मद्दत को लागी धन्यवाद र सबैलाई चुम्बन।
नमस्कार स्यान्ड्रा, कन्र्नस्टार्च मकैको पिठो हो र यो ठूलो प्याकेजमा आउँछ (२g० ग्राम, g०० ग्राम ...) र तपाईं टेबलस्पून खसाल्दै हुनुहुन्छ, म तपाईंलाई प्याकेजको फोटो छोड्दछु ताकि तपाईं यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ, ती व्यक्तिगत खामहरू छैनन्:
तपाईंले यसलाई कुनै पनि सुपरमार्केटमा, पिठो क्षेत्रमा पाउन सक्नुहुन्छ। भाग्यशाली !!
नमस्ते पकोटे, फ्रिजमा करीव hours घण्टा पर्याप्त छ। तर यो याद गर्नुहोस् कि फ्रिजमा राख्नु अघि मिश्रण राम्रो गरीयो, ठीक छ? तपाईं हामीलाई कस्तो छ हामीलाई बताउनुहुन्छ!
मारिया पेरेज भन्यो
चिसो भएपछि फ्रिजमा मक्खन सक्छु
मारिया पेरेजलाई जवाफ दिनुहोस्
होइन, तपाईंले यसलाई फ्रिजमा राख्न आवश्यक पर्दैन! यस प्रकारको आइसक्रीम स्थिर छ र यसको सेवा गर्नु अघि, तपाईंले यसलाई ब्लेडको साथ केही क्रस गर्नुहोस्, गति २० मा २० सेकेन्ड।
यो धेरै क्रीमयुक्त र धनी छ!
यो प्रयास गर्नुहोस् र हामीलाई भन्नुहोस्, ठीक छ?
तपाई कहिले उल्टो चिनी राख्नुहुन्छ?
यदि तपाइँ उल्टो चिनी प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, यसलाई पहिलो चरणमा राख्नुहोस् तर याद गर्नुहोस्, केवल २%% सेतो चिनी सामान्यतया इन्भर्टेडको लागि प्रतिस्थापित हुन्छ ... त्यसैले यो नुस्खाको लागि यो हुनेछ: white 25 सेतो चिनी र २ in उल्टो चिनी।